Klopp oo jawaab kulul ka bixiyay hadaladii dhawaan ka soo yeeray Guardiola – Gool FM
Dajiye May 9, 2022
(Liverpool) 09 Maajo 2022. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa ka jawaabay hadaladii Pep Guardiola oo si dadban u weeraray Reds, kaddib markii ay City 5-0 ku xaaqday Naadiga Newcastle United.
Guardiola ayaa sheegay kaddib guushii Manchester City ay 5-0 kaga badisay Newcastle United, ciyaartii ugu danbeysay ee Premier League, wuxuu ka dhawaajiyay:
“Todobaad ka hor qof walba oo dalkaan UK jooga waxa uu taageerayay Liverpool, haddii ay ahaan lahayd warbaahinta iyo qof waliba, koobka innaga ayuu gacanteenna ku jiraa, taas ayaana muhiim ah.”
Klopp ayaa wax laga weydiiyay hadalka Guardiola, mar uu shir jaraa’id qabtay maanta oo Isniin ah, kahor inta aysan Reds ku wajihin Aston Villa berry ciyaar qeyb ka ah horyaalka Premier League, wuxuuna ku jawaabay:
“Waxaan ku noolahay Liverpool, marka haa, dad badan oo halkan jooga ayaa doonaya. si aan ugu guuleysano Premier League.”
“Ma garanayo sida saxda ah xaaladda Pep kaddib markii ay ka hareen Champions League … Laakin Liverpool mar hore ayey gaartay finalka.”
“Wax fikrad ah kama haysto haddii dalka oo dhan ay anaga taageerayaan, ma garanayo taas… taasi ma ahan dareenka aan helo marka aan aadeyno garoomada kale si aan u ciyaarno kulamo.”
“Xaqiiqdii weyn ka duwan tahay, laakiin malaha Pep wax badan ayuu ka og yahay arrintan.”
"Liverpool Taariikh kuma lahan Premier League, koobka horyaalkana gacanteenna ayuu ku jiraa" - Pep Guardiola oo karbaashay Reds
Cristiano Ronaldo oo sheegay shuruuda kaliya uu kusii joogayo Man United Xilli Ciyaareedka soo socda